Bulsho – Indheergarad
720 View Indheergarad – Oktoobar 10, 2019 – Hakis – Vol: 01 – Cadadka: 34aad Warqad yar oo cawlan ayaa ay miiska dushiisa soo saartay. Markii hore dan kama ay lahayn laakiin mar dambe ayay gadaal […]
561 View Indheergarad – Sebtembar 10, 2019 – Lamtako – Vol: 01 – Cadadka: 25 Haybaashiya waxa ay ahayd gabadh noolayd sannadihii (370 – 415-kii) miilaadiga sida ay qabaan taariikhyahannada badankood. Haybaatiya (Hypatia) waa magac laatiin […]
455 View Indheergarad – Ogoosto 22, 2019 – Hakis – Vol: 01 – Cadadka: 16aad Hordhac Aadanaha adduunka ku nool mid walbaa waxay leedahay nidaamyo is-maamul hoosaad iyo xeerar kala jideeya una degsanaa muddooyin aad dheer […]
618 View Indheergarad – Ogoosto 18, 2019 – Koobin – Vol: 01 – Cadadka: 07 Hordhac Dhigahan la magac baxey “GUURE”. Waa buug kal-tirsigan 2019-ka kusoo buurey khaanadda dhiganayaasha ku qoran Afka Soomaaliga. Dhiganahan oo la […]